टिप्स – Simple Khabar
शिब भगवान कैलास पर्वतमा साक्षात देखिनु भयो दर्शन गर्नु होस मनोकामना पुरा हुनेछ
शिवलाई संहारको देवता भनिन्छ। भगवान शिव सौम्य आकृति एवं रौद्ररूप दुवैको लागि विख्यात छन्। अन्य देवहरू भन्दा शिवलाई भिन्न मानिएको छ। सृष्टिको उत्पात, स्थिति एवं संहारको अधिपति शिव हुन्। त्रिदेवहरूमा भगवान शिव संहारको देवता मानिन्छन्। […]
काठमाडौँ। सुतेपछि सपना देख्नु स्वभावीक हो । देखिएका केही सपनाहरु शुभ हुन्छन भने केही सपनाहरु लाई शास्त्रले नै अशुभ मानेको छ । मत्स्य पुराणको २४२ औँ अध्यायमा सत्ययुगमा भगवान विष्णुले मत्स्य अवतार लिएका थिए त्यतिबेला […]
कतै हजुर पनि पर्नु भो कि ? यी हुन् प्रेममा धोका नदिने ५ राशिका युवतीहरु….जानी राखौ
एजेन्सी । ज्योतिषशास्त्रको अनुसार केहि यस्ता विशेष राशिहरु छन् जसले प्रेममा धोका दिँदैनन् । यदि युवतीहरुको कुरा गर्ने हो भने खासगरी ५ राशिका युवतीहरु आफ्नो पार्टनरलाई धेरै माया गर्ने र कहिले पनि धोका नदिने हुन्छन् । […]
पति पत्नीबीचको प्रेममा कमी भयो भने तथा केही कुरामा सम्झदारी भएन भने घरमा कलह बढ्दै जान्छ। कहिले काही नचाहादा नचाहदै सानो सानो कुरामा पति पत्नीबीच झगडा हुने गर्दछ। सानो सानो कुरामा मन मुटाब हसँदा सम्बन्धमा दरार […]
On February 9, 2019 By simplekhabar
टिप्स । परिबर्तनशिल समय संगै आधुनिक समाजमा मागी विवाह भन्दा प्रेम बिबाह धेरै हुने गरेको पाइन्छ । तर यदि तपाईहरु मागी विवाह गर्न जाँदै हुनुहुन्छ भने केही महत्वपुर्ण प्रश्नहरु युवतीलाई सोध्नुहोस् । एक अर्काको आनीबानी थाहा […]
पुरुष भैसके पछि यी १० कुराहरुमा अबल हुनुपर्छ महिलाहरु आकर्षित हुन्छन्
धेरै पुरुषहरु महिलाहरुलाई कसरी आकर्षित पार्ने भनेर सोचिरहेको हुन्छ । वास्तविक जीवनमा पुरुषबाट आश गर्ने व्यवहारलाई ध्यान दिएर अध्ययन गरिएको थियो । यस्तो छ पुरुषका १० गुण जसले महिलालाई हुरुक्कै पार्ने गर्दछ । १. दीर्घकालिन […]